दसैँ तिहारमा मासु खान जाने पोषण नजाने रोगको घर – Etajakhabar
दसैँ तिहारमा मासु खान जाने पोषण नजाने रोगको घर
काठमाडौं – नेपालीहरूको ठूलो चाड दसैँ सुरु भइसकेको छ । दसैँमा मासुका परिकार बढी खाने चलन छ । खान जान्दा मासु पोषण हो, तर खान नजाने रोगको घर । त्यसैले चाडबाडको नाममा जथाभावी मासु नखानुहोस् । ठिक्क खानुहोस्, स्वस्थकर मासु खानुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस् :
डा. अरुणा उप्रेती, न्युट्रिसियन -आमनेपालको बानी मासु स्वादका लागि खाने हो भन्ने नै छ । तर, स्वादका लागि मासु खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सोच्न सक्नुपर्छ । स्वादभन्दा स्वास्थ्यलाई बढी महत्व दिएर मासु खानुपर्छ ।
बिग्रेको मासु यसरी चिन्ने डा. केदार कार्की, पशु स्वास्थ्यविज्ञ दसैँमा घरमा धेरै मासु छ भने कसरी स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने भन्ने समस्या पर्न सक्छ । अक्सिजनको मात्रा नमिल्दा मासुको स्वरूपमा आउने परिवर्तनले बिग्रिने गर्छ । सामान्य फ्रिजमा लामो समय राखेको मासु बिग्रिने तथा अस्वस्थकर हुने गर्छ । डिपफ्रिज सबै घरमा उपलब्ध हुँदैन । त्यसो भए मासु बिग्रेको कसरी थाहा पाउने ?
-ढुसी परेर बिग्रिएको मासु त हेर्दा प्रस्ट नै थाहा हुन्छ । मासुको कुनै भाग चिपचिप भएको छ भने पनि ठान्नुहोस् कि त्यो भागबाट मासु बिग्रिन सुरु भयो । मासु स्वाभाविक रंगको सट्टा फिक्का वा कालो, निलो हुन्छ । ग्यास उत्पादन हुने, गन्ध फरक आउने, बोसो पग्लेर जाने पनि हुन्छ । अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा पनि बाँच्न सक्ने जीवाणुका कारण मासु कुहिने र अमिलो स्वाद आउने हुन्छ । वेलैमा सावधानी अपनायो भने मात्र मासु गोठदेखि ओठसम्म सफा र स्वस्थकर हुन सक्छ ।
-मासु लामो समय सञ्चय गर्ने हो भने शून्य डिग्री फरेनहाइट वा त्योभन्दा कम तापक्रममा राख्नुपर्छ । यो तापक्रमले मासुजन्य तन्तुमा हुने सबै खाले गतिविधि निष्क्रिय पार्छ र मासुको गुणस्तर बिगार्न सक्ने विषाणु, जीवाणु तथा ढुसीको संक्रमणबाट बचाउँछ । चिस्याएर राखेको मासु प्रेसर कुकरमा पकाएर खानु उत्तम हुन्छ ।
-राँगाको मासु १२ महिना, बंगुर तथा बदेलको ६ महिना, खसी, बोका, भेडा र च्यांग्राको ६ देखि ९ महिनासम्म चिस्याएर सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तर, याद गर्नुहोस्, यो सामान्य फ्रिजमा चिस्याउने भनेको होइन । डिप फ्रिज आवश्यक पर्छ ।
-मासु अत्यधिक पकाएर खाँदा पनि स्वस्थ हुन्छ । यसरी पकाउँदा मासुका जीवाणु, विषाणु नस्ट हुन्छन् । योबाहेक १५० देखि १६० डिग्री फरेनहाइट तताएर पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यसरी पकाएपछि मासुलाई फ्रिजमा राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
-मासुलाई २५० डिग्री फरेनहाइटमा पकायो भने स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सबै जीवाणु तथा विषाणु नष्ट हुन्छन् । यसरी पकाएको मासु केही लामो समयसँग सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
-मासुलाई जलविग्रहीकरण गरेर पनि लामो समय सुरक्षित राख्न सकिन्छ । यो भनेको पानीको मात्रा पूरै नष्ट गरेर राख्नु हो । बोलीचालीको भाषामा यसलाई सुकुटी बनाउने भनिन्छ ।
-परम्परागत मरमसाला प्रयोग गरेर पनि मासु सुरक्षित राख्न सकिन्छ । यी मसलाले मासु सुरक्षित मात्रै गर्दैन, स्वाद पनि मिठो बनाइदिन्छ । तर, मसला भने प्राकृतिक रूपमा बनाइएको हुनुपर्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
-अम्लीकरण गरेर पनि मासु लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ । मासुमा हुने कार्बोहाइड्रेडलाई अम्ल अर्थात् एसिडमा परिवर्तन गरिनु हो । यसो गर्दा मासुमा रहेका जीवाण तथा विषाणुको संख्या वृद्धि हुन पाउँदैन र मासु बिग्रिनबाट जोगिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०८, २०७४ समय: ९:३७:४४